ဘယ်အချိန်မှာယူရို 2021 ကျင်းပမလဲ? ဘယ်လလဲဘယ်လလဲ? - Beteuro2021
ဘယ်အချိန်မှာယူရို 2021 ကျင်းပမလဲ? ဘယ်လလဲဘယ်လလဲ?
Posted on 27 April 2021 28 April 2021 by Gia cát lượng
ယူရို ၂၀၂၁ အားကစားရာသီသည်မဝေးတော့သောအနာဂတ်တွင်မျှော်လင့်ထားသည့်အများဆုံးအဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်ဤခရီးအတွက်အချိန်နှင့်ကျန်းမာရေးကိုစီစဉ်ရာတွင်တက်ကြွသောဖြစ်လိုပါကသင်သိရန်လိုအပ်သည် ယူရို ၂၀၂၁ ဘယ်အချိန်မှာ နေရာယူခဲ့သလဲ?ဘယ်မှာကျင်းပမလဲ။ အထက်ပါပြproblemsနာများအတွက်မှန်ကန်သောအဖြေများမရသေးပါကအောက်ပါဆောင်းပါးကိုbeteuro2021.netတွင်ဖတ်ပါ
မည်သည့်လမှာ ဘယ်နိုင်ငံအားဖြင့် ယူရို ကျင်းပမည်လဲ?
ယူရို ၂၀၂၁ ရာသီ ဘယ်ချိန်မှာ နေရာယူခဲ့သလဲ?
ယူရို ၂၀၂၁ အတွက်နေရာဘယ်မှာလဲ
ပွဲစဥ် ပြောင်းလဲမှု နေရာ၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ
၂၀၂၀ သည်ယူရိုရာသီအဖြစ်အပျက်ကာလအတွင်းဘောလုံးအားကစားအတွက်အလွန်ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်သည်။ သို့သော် Covid 19 ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့်ရှုပ်ထွေးသောဖွံ့ဖြိုးမှုတို့ကြောင့်ထိုအဖြစ်အပျက်သည်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်တစ်နှစ်နောက်ကျခဲ့သည်။ အစပိုင်းတွင်ပရိသတ်များသည် ၂၀၂၀၊ ဇွန် ၁၂ ရက်မှဇူလိုင် ၁၂ ရက်အထိပြိုင်ပွဲကိုတက်ရောက်ရန်အချိန်မျှော်လင့်ခဲ့ကြသော်လည်း ၂၀၂၁၊ ဇွန် ၁၁ ရက်မှဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်အထိအချိန်ဇယားကိုရွှေ့ဆိုင်းခဲ့သည်။
အချိန်တစ်နှစ်နှောင့်နှေးခဲ့သော်လည်းယူအီးအက်ဖ်အေမှစီစဉ်သူများကယခုရာသီ၏တရားဝင်အမည်ကိုယူအီးအက်ဖ်အေ 2020 အဖြစ်ယူမှတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ ရာသီ၊ ပွဲစီစဉ်ခြင်းနှင့်ဂိမ်း၏စည်းမျဉ်းများအပြောင်းအလဲများစွာနှင့်အတူရာသီဖြစ်သည်။
ပိုမို၍ ဖတ်ပါ: Giải bóng đá Euro mấy năm 1 lần được diễn ra?
ယခုရာသီ၏ထူးခြားချက်တစ်ခုမှာကစားသမားများသည်အိမ်ရှင်နိုင်ငံယူရိုယူရိုသဘောတရားမရှိတော့သောကြောင့်ပြိုင်ပွဲကိုနိုင်ငံများစွာ၌ကျင်းပမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်. ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်သည့်စွမ်းရည်ကြီးမားသည့်ခေတ်မီအားကစားရုံများတွင်ပါ ၀ င်သောနိုင်ငံပေါင်း ၁၂ နိုင်ငံသည်ယခုရာသီတွင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆောင်ကြဉ်းပေးမည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်စီစဉ်သူများသည်ယူရို ၂၀၂၁ အတွက်နေရာစီစဉ်ထားသည်
အစီအစဥ်မှာ ပါဝင်မည့် နိုင်ငံများ -ဒိန်းမတ်၊ ဂျာမနီ၊ ရိုမေးနီးယား၊အင်္ဂလန်၊ဟန်ဂေရီ၊ နယ်သာလန်၊အဇာဘိုင်ဂျန်၊အီတလီ၊အိုင်ယာလန်သမ္မတနိုင်ငံ၊ရုရှား၊စပိန်၊စကော့တလန်။ Wembley အားကစားကွင်း၌လူပေါင်း ၉၀၀၀၀ အထိအကြီးမားဆုံးသောစွမ်းရည်ကိုလန်ဒန်မြို့တွင်ဆီမီးဖိုင်နယ်နှင့်ဗိုလ်လုပွဲနှင့်အတူကျင်းပခဲ့သည်။ အဖွင့်ပွဲကိုရောမမြို့၌ Olimpico အားကစားကွင်း၌လူပေါင်း ၇၂,၆၉၈,၀၀၀ အားဖြင့်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
နေရာပြောင်းရန်ကနဦး စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သော်လည်းတူရကီ မှလွဲ၍ နိုင်ငံများစွာမှအပြုသဘောဆောင်သောတုံ့ပြန်ချက်ကိုရရှိခဲ့သည်။ ယူအီးအက်ဖ်အေယူရိုသည်ဥရောပတွင်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအခြေအနေ၏ဖိအားကြောင့်အခြေခံအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောနိုင်ငံများအကြားတွင်ကွဲပြားသည်။ အခြားနှစ်များကဲ့သို့အိမ်ရှင်နိုင်ငံအတွက်ဖိအားအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်စုစည်းရန်နေရာချပါ။
ရာသီအတွက်ကြီးမားသော ၀ င်ငွေရရန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများပိုမိုဆွဲဆောင်ပါ။
ရာသီအလိုက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အခွင့်အလမ်းများနိုင်ငံများအားကူညီပါ။
ကြည့်ရှုပါ- ယူရို 2021 ကိုဘယ်မှာကျင်းပသလဲ? ယူရို ၏ တရားဝင် တည်နေရာ
ကတ်စတတ်မာ ဝန်ဆောင်မှု 24/7 1xBet လင့်ခ်